Calaamadda Shiinaha Caano 100% Suuf Raglan T funaanad wax soo saar iyo Warshad | ISAPPARELS
Logo Custom 100% Cotton Raglan T shirt
Qaabka: Logo Custom ah 100% Cotton Raglan T shirt
Dhar 100% Cudbi
Miisaanka Dharka 160g-220g
Astaanta Loo habeeyay
Astaamaha la nuugi karo, dhaqso u qalalan, la kala bixin karo, culeys fudud, jilicsan & raaxo leh.
Waqti Sample ah 2-7 maalmood oo shaqo
Shuruudaha Ganacsiga FOB, CIF, EXW, DDP
Shuruudaha Bixinta T / T, Western Union, L / C, Paypal Shuruudaha bixinta 30% dhigista kahor, 70% dheelitirka kahor rarka
Maraakiibta Xawaare, hawo iyo badba
Xirxirida Ku xirxirida kartoonka dhoofinta caadiga ah ama codsashada macmiilka
Muxuu noo Chooes
1. Waxaan hogaamineynaa alaab-qeybiyeyaasha Nanchang ee Shiinaha in ka badan 23 sano.
2. Waxaan bixinaa hal-istaag serivce oo loogu talagalay naqshadeynta gaarsiinta.
3.Waxaan awood adag ku leenahay silsiladda sahayda. Waxaan abaabulnaa dharka / maaddada, waxaan ka xakameynnaa dunta illaa dheeha ilaa dharka dhammaaday. Adeeggayagu wuxuu ka yimid naqshadaynta / jees jees ilaa noocii ugu horreysay, PPSample, wax soo saar ballaaran, illaa baaristii hore iyo keenista.
4. Waxaan leenahay R&D, QC, QA, kooxo dokumenti ah iyo kooxo iib ah dabcan. Ujeeddadeennu waa inaan hubinno oo xallino dhibaato kasta oo suurtagal ah kahor wax soo saarka iyo rarka.
5. Warshaddeenu waxay leedahay shahaado BSCI, SEDEX iyo Otex-100, imtixaanka SGS sida midab xawli, yaraansho, anti-pilling iwm.
6. Waxaan leenahay iibka jumlada noo gaarka ah ee khadka tooska ah.Pls ka hubi www.isapparels.com tirada ka hooseysa 1000 kumbiyuutar walboo kasta.
7. Waxaan inta badan ka qeyb galnaa bandhigyo ganacsi oo muhiim ah sida Las Vegas, Canada, Hk iyo Canton Fair.
Shaxda socodka ganacsiga
Shaxda socodka wax soo saarka
Waxaan kula talinaynaa macaamiisheenna inay si taxaddar leh u doortaan midabka saxda ah, sida ku cad Midabada Pantone Adiguba waa lagugu soo dhaweynayaa inaad noo soo dirto muunado noo xaqiijinaya midabada.
Maaha inaan kugula talinno inaad sawirro ku qaadatid oo keliya taleefanka gacanta si aad uga fogaato farqiga midabka, gaar ahaan intaad u baahan tahay midabbo aad u sax ah .Sida aad ogtahay, midabbada ayaa aad ugu kala duwanaan kara cilaaqaadka nalalka.
Cabbirka loo habeeyay
Hore: Shaararka Polo ee ragga moodada
Xiga: Dharka dharka 4/3 gacmo tolmo shaati ah
Xirmada maaliyada kubada cagta ee cu ...
Dharka Dumarka ve ...
Kubbadda koleyga loo habeeyay ...
Ragga Fitness Jerseys Runni ...
Rugby League xidho rugby u ...
Ninka Bomka Badbaadada Jiilaalka ...